Min Naing's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (1)Discussions (16)EventsGroups (6) Min Naing's Likes Min Naing's Friends
View All Min Naing's Groups
Min Naing has not received any gifts yet
. : . 欢 迎 所 有 的 朋 友 们 . : .
Have A Visit To http://minnaing.com/ ! ! !About Your System DetailDecryption Cisco Type7PasswordWeather Forecasting Profile Information
CCNA, AGTI ( Electronics & Communication )
My Blog from MinNaing.Info
Loading feed	Min Naing's Blog
My Free Desktop
Posted on July 4, 2010 at 9:30pm2Comments
My Free Desktop: အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ဟာ0Cost ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် Microsoft Windows User တွေကတော့ Operating System ကိုဝယ်ရမှာပါ။ အခုဟာကတော့ Application တွေကို Free ရနိုင်တဲ့နည်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ PC သုံးတဲ့ User များဟာအများ အားဖြင့် Operating System ကို အားကိုးလို့မရပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့လုပ်ခန်းဆောင်တာကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ Application Software တွေသုံးပြုကြရတယ်။ Application တွေဟာငွေကြေးပေးဝယ်ရတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချို့ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူတွေကျတော့ Crack ဖြည်ပြီးသုံးရတယ်။… Continue AddaBlog Post
At 8:44pm on February 8, 2010, Wayne said… hi bro,
and thanks for trying python
:) At 6:23pm on May 7, 2009, manawphyulay said… No comments yet!